RC Cars KOOWHEEL 1:16 Isikali 2WD Cima Road Ulawulo Olukude Cars nge-2 zitshajwe Battery 2.4GHz Radio Remote Control Truck Monster Speed ​​High qha USB Charger RC Car for abadala kunye Kids (blue) - Jomo Technology Co., Ltd
RC Cars KOOWHEEL 1:16 Isikali 2WD Cima Road Ulawulo Olukude Cars nge-2 zitshajwe Battery 2.4GHz Radio Remote Control Truck Monster Speed ​​High qha USB Charger RC Car for abadala kunye Kids (blue)
Iimpawu Product Key:
Eyinyaniso Desert nqwelwana:
1:16 Scale, ukunqunyanyiswa Independent, yonke ntlango kwi kolawulo lwakho, oku RC imoto elawulwa-kude uvumela ukuba ukudlala elunxwemeni, isanti, ingca yaye naphi na apho ndingathanda.
2.4 GHz Ulawulo Olukude:
Strong anti-uphazamiseko, nto leyo yenza iimoto ezininzi ukuze ezibaleka kunye ngexesha elinye kunye nendawo. Ukuba ufumana 2 ngaphezulu KOOWHEEL RC truck, kuya kuba mnandi kakhulu ukuba ukubaleka abaninzi icala iimoto ulawulo kude ecaleni.
Kabini Ixesha Double Fun:
Koowheel iimoto beze neebhetri-2, akwazi ukuxhasa amandla injini ukufikelela isantya top of 12 mph. Ibhetri elizeleyo wabaleka imiz 10-15. Ukutshaja ibhetri nge USB port, nonke nina kufuneka ukuqalisa ezi-3 iibhetri AA ngenxa sixhobo!
Easy ukuba Sebenzisa:
KOOWHEEL ukunika imali epheleleyo okanye ukutshintsha enye ukuze kwisithuba seentsuku ezingama-30. Elungisa Free siyiguqulela ezimotweni e US ukuba ukuze kwisithuba seentsuku ezingama-365. Ready to impendulo kwiiyure ezingama-24. SO Yongeza kwinqwelo NGOKU!
2.4G Isilawuli CAR2.4 GHz ulawulo radio: strong anti-uphazamiseko, nto leyo yenza iimoto ezininzi ukuze ezibaleka kunye ngexesha elinye kunye nendawo. Ukuba ufumana 2 ngaphezulu KOOWHEEL RC truck, kuya kuba mnandi kakhulu ukuba ukubaleka icala iimoto ezininzi ecaleni.
Nceda uqaphele: 3 reasons below for short-driving-time of the battery :
Ixesha ehlaselayo lifutshane kakhulu ukuxhasa umdlalo.
Previous: Koowheel K3 6.5 intshi Electric Hoverboard kunye Bluetooth Self Ukulinganisela Scooters for Kids Adult
Next: RC Cars for Kids KOOWHEEL Remote Control Car 360 ejikelezayo 4WD Cima Road amacala amabini ejikelezayo shiti - 2.4Ghz High Speed ​​Rock qha Vehicle kunye izibane Abantwana Birthday Gifts RC Car for Kids
Koowheel patent 2 wheel self balance isithuthuthu 7Ndobafaka ...
Koowheel Patent Innovative nendlela kuyilo e ...
Le kwizinga eliphezulu amandla-ukunceda isithuthuthu yombane ...
Koowheel Exclusive Patent 8 intshi DotA Electric ...
The best fashion encinane amandla-ukunceda abantwana electri ...
design KOOWHEEL New Hovershoes smart self balan ...